Adobe Premiere sy ny vokarin'ny horonantsary efa voafaritra | Famoronana an-tserasera
Pablo Gondar | | Fitaovana famolavolana, Tutorials
Adobe Premiere sy effets vidéo Mpiara-miasa lehibe amin'izy ireo izy na iza na iza matihanina na mpampiasa te hanova horonantsary. Izy io dia programa mamela antsika manova horonan-tsary amin'ny fomba matihanina misaotra ny interface tsara sy isan-karazany ny fahafaha-manova ny horonan-tsary. Manolotra a fahafaha-manao tsy misy farany rehefa miasa miaraka amin'ny horonan-tsary, manome ny mpampiasa karazana format mifanentana.
Fitaovana lehibe hampiharana ny karazana rehetra fanovana horonan-tsary amin'ny fomba saika mandeha ho azy Premiere mamela antsika hanisy fiovana amin'ny horonantsarinay. ny vokatra efa voafaritra dia fandraisana anjara lehibe rehefa miresaka mamorona fitaovana audiovisual miaraka amin'ny hatsarana mahafinaritra, un vokatra isan-karazany ary lehibe izany fahatsorana fampiasana ataovy fitaovana mahomby ho an'izay mitady hamorona atiny audiovisual hafa haingana ity.
En Premiere andao hitady iray Safidy isan-karazany hanovana ny horonantsarinay, avy amin'ny vokatra efa voafaritra amin'ny safidy sarotra kokoa nefa natao tamin'ny fomba izay tena mora ampiasaina izy ireo. Raha zatra miasa ianao Adobe Tsy ho sarotra aminao ny hifindra amin'ny interface-ny satria ny programa rehetra an'ny Adobe Manana sehatr'asa mitovy amin'izany ry zareo mba hahafahan'ny mpampiasa miasa amin'ny fomba milamina kokoa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny andian-dahatsoratra antsoina hoe fotsiny isika "Vokatra kinematika", ireo vokatra ampiharina amin'ny horonantsary ireo dia manome antsika estetika samy hafa, ny fampiasana azy io dia ny tanjany lehibe.
Ohatra iray amin'ny zavatra azo atao amin'ity karazana fitaovana fitsaboana sary ity dia azo jerena amin'ny sarimihetsika sinema, tokony ho fantatsika fa ny tsirairay horonan-tsary manana ny loko manjaka izay mampiavaka azy.
Rehefa manitsy horonantsary, ny zavatra voalohany ilaintsika dia ny manana fitaovana audiovisual manomboka miasa. Raha vantany vao manana an'ity fitaovana ity isika dia hankany Premiere.
Hanombohana dia handeha amin'ny safidy isika effets vidéo izay hita eo amin'ny ilany havia ambany amin'ny programa. Amin'ity fizarana ity dia hitady ny fampirimana Lumitri mijery, vantany vao misokatra isika dia hahita ny vokany mety azontsika ampiharina amin'ny horonantsarinay, anisan'izany ny vokatry ny sinema.
Amin'ity fizarana ity dia ho hitantsika ny vokany rehetra izay azontsika ampiharina amin'ny horonantsarinay.
Ny dingana farany hampiharana ny vokany amin'ny horonantsarinay dia tena mora. Tarihinay mankany amin'ny clip video ny vokany hita eo amin'ny fizotry ny fotoana. Raha vantany vao manao an'io isika dia hampiharina ho azy amin'ny horonantsary ny vokany.
Araka ny hitantsika mampihatra vokany amin'ny Adobe Premiere zavatra tena izany haingana sy mora izay mamela antsika hiasa amin'ny fomba mandeha ho azy kokoa rehefa manitsy horonantsary. Tena mahaliana ny manana an'ireto safidy efa voafaritra ireto ho fanohanana ireo tetikasa manokana, saingy "atolotra" mba hamorona izany fanatontosana farany ny fisehoan'ny horonantsarinay izany irery. Adobe Premiere, toy ny Photoshop sy programa hafa Adobe mamela antsikaapetaho amin'ny karazana fitsaboana ny sary rehetraNoho io antony io dia afaka mamorona hatsarana kanto hita maso ho an'ireo horonantsarinay amin'ny fomba misokatra tanteraka isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Adobe Premiere sy ny effets vidéo
Fisarahana matetika hanadiovana ny hoditra amin'ny Adobe Photoshop